Cusboonaysiinta software – Bogga 9 – Windows – Vessoft
Norton 22.14.0.54 Security Premium...
Difaac guud, Antiviruses
Nidaamka fayraska adag oo leh heer badbaado oo ku habboon waxaa loogu talagalay wax ku ool ah wax ku oolka fayraska casriga ah iyo noocyada kala duwan ee hanjabaadaha internetka.
العربية, English, Français...
MP4 Player 3.22.5
Ciyaaryahan warbaahinta ayaa sheegay in ay taageertaa qaabab kala duwan. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u abaabuli maktabadda music iyo subtitles u arkaan.
MP4 Converter 3.22.5
Si sahlan ay u isticmaalaan Converter si loogu badalo faylasha video qaabab warbaahinta kala duwan. Software taageertaa qaabab warbaahinta ugu caansan iyo processing Dufcaddii faylasha ah.
Qalab u sahlan tahay baadhi iyo dajinta ee files kala duwan ee internetka. Software The kuu ogolaanayaa inaad si loogu badalo faylasha bixi in qaabab loo jecel yahay oo soo saaro track audio ka video ah.
Software awood leh si ay u soo bixi files si deg deg ah. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u baadhaan ee buugga weyn ee files warbaahinta iyo u eegto macluumaadka iyaga ku saabsan.
Xoogbadane haboon macmiilka email inay la shaqeeyaan xisaab badan. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay ula adeegyo kala duwan oo online iyo codsiyada shaqeeyaan.
Software in ay ka shaqeeyaan alaabtii teebabka, dabaysha iyo xarig. Software wuxuu isticmaalaa technology ee codka ugu macquul ah oo alaabta muusikada ah.
Bedelaadaha sawir qaadayaasha, Isbedelada warbaahinta
Converter The functional ah files multimedia. software The kuu ogolaanayaa inaad si loogu badalo files kala duwan gelin qaabab loo jecel yahay, waayo, computer iyo kombuyuutarrada gacanta.
Tababaraha ayaa habboon in la download video files ka Facebook iyo adeegyada kale ee caanka ah. Software ayaa awood u si loogu badalo videos ee qaabab kala duwan audio iyo soo saaro ay raad audio ka video files.
Driver Easy 5.6.3.3792
Barnaamijka waxaa loogu talagalay inuu cusbooneysiiyo darawalada maqan ama dib loo dhigay ee qalabka lagu rakibay kombuyuutarka.
software The inuu ka soo kabsado xogta lunsan oo qaabab kala duwan ka computer ah oo ku xiran in ay sidayaal dibadda.
qalab The awood leh si ay u qalabayn raadinta, si loo farsameeyo iyo socdo xaddi badan oo warbixin ka soo internetka. software The kuu ogolaanayaa inaad dhoofiyaan xogta helay inuu qaabab kala duwan.
software ee isgaarsiinta qoraalka iyo video la isticmaala kale ee adduunka ah. Sidoo kale waxaa suurogal ah in uu abaabulo qolalka gaar ah mawduucyada kala duwan si looga doodo.
Emulators & Mashiinka Waalidka
Emulator xorta ah ee nidaamka hawlgalka Android. Software wuxuu hubinayaa loo maqli karo oo tayo sare leh codsiyada Android oo software ah.
Tool in ay kordhiyaan xawaaraha gudbinta xogta dhexeeya your computer iyo server ciyaarta. Barnaamijku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si ay u hagaajiyaan xawaaraha la xidhiidha in kulan oo caan ah oo kala duwan ah.
Wise Registry Cleaner 9.6 Standard...
software The canaanto khaladaadka iyo nadiifiyaa diiwaanka nidaamka. software ka kooban yahay qalab dheeraad ah si loo hagaajiyo qaab kombiyuutarka.
Dareemaha Webka, VPN iyo Wakiil
browser ayaa waxaa loogu talagalay tiirka ammaan ah iyo si qarsoodi ah ee internet-ka. software waa ay awoodaan in ay sir gaadiidka soo socda iyo xilka.
Tani waa software la leh buro kala duwan oo taageera lakabyada iyo horey loogu soo bandhigo si loo abuuro sawirrada dhijitaalka ah adigoo isticmaalaya kiniin muuqaal ah.
Software ah in carruurta la baro mabaadii’da aasaasiga ah ee barnaamijyada. Software wuxuu isticmaalaa interface la fududeeyey ee horumarka haboon mashaariic kala duwan.
Tani waa layli bilaabi karo La-qabsasho bilaabi karo oo kala-geddisan faylasha, faylasha, codsiyada iyo abuurista siyaabo gaar ah oo loogu talagalay.
CD & DVD & USB gaari
Sawireynta iyo qaabeynta
Opera 55.0.2994.14 beta